Kindy ee Queensland (Somali) - Early Years Count (TEYC)
Home / 3-5 / Multicultural families / Care / Kindy ee Queensland (Somali)
Kindy ee Queensland (Somali)
Waa maxay kindy?
Kindergarten, ee loo yaqaanno Kindy, waa barnaamij waxbarasho oo wakhtiga badhkii ah looguna talogalay carruurta sanadka dugsiga ka horeeya. Aadida barnaamijka Kindy waxa ay u oggolaanaysaa ilmahaaga in uu wax ku barto ciyaarta, saaxiibo samaysto uuna u diyaar garoobo u wareegida dugsiga.
Barnaamijyada Kindy ee ay ansixisay Queensland Government waxa ay ku salaysan yihiin ciyaar waxana bixiya macalin khibrad u leh oo carruurnimada hore ah. Barnaamijyada Kindy waxa lagu bixin karaa xarumaha waxbarashada carruurnimada hore; qaar ka mid ah dugsiyada tuulooyinka ee fog; ama waxbarashada masaafada ama eKindy ee carruurta qaarkood kuwaasi oo aan heli karin xarun.
Wax ku barashada kindy
kindy, carruurtu waxa ay ku barayaan ciyaarta si ay:
U isticmaalaan luuqadda si ay u xidhiidhiyaan fikradaha iyo dareennada
U samaystaan asxaab, ay la wadaagaan ayna la ciyaaraan kuwa kale
Ay wax ku bartaan waayo-aragnimo cusub
Ay noqdaan kuwo aad iskugu kalsoon ayna dareemaan awood
Ay ku muujiyaan naftooda farshaxan, qoob ka ciyaar iyo ciyaaro xiiso leh
Ay dhisaan aqoontooda, shaaca ka qaadaan fikrado cusub ayna ka caawiyaan in ay ku raaxaystaan bilawga dugsiga.
Sida la isku diiwaangeliyo
Queensland, carruurtu waxa ay aadi karaan Kindy sanadka dugsiga ka horeeya. Adeeg kastaa waa mid midka kale ka duwan qaarkoodna waxa ay lahaan karaan liiska sugida,
sidaa daraadeed waa fikrad fiican in aad kala hadasho doorashadaada adeega kindergarten ee aad dooratay wakhtiga ugu habboon ee ilmahaaga aad diiwaangelin karto.
Ilmahaagu waa in uu noqdaa 4 sano jir 30 ka Juun si uu uga qaybqaato Kindy.
Dhalashada ilmaha Ilmuhu waxa uu tagi karaa kindy
1 Luulyo 2013 ilaa 30 Juun 2014 2018
1 Luulyo 2014 ilaa 30 Juun 2015 2019
1 Luulyo 2015 ilaa 30 Juun 2016 2020
1 Luulyo 2016 ilaa 30 Juun 2017 2021
1 Luulyo 2017 ilaa 30 Juun 2018 2022
1 Luulyo 2018 ilaa 30 Juun 2019 2023
Waxa aad u baahan doonta si aad u qorto ilmahaaga:
magaca iyo ciwaanka ilmaha
macluumaadka sida waalidiintooda, ilaaliyaha ama wakiilka
macluumaadka amarro kasta oo maxkamadeed ama amarrada waalidka ama qorshayaasha
macluumaadka shuruudo kasta oo gaar ah (sida. Naafanimada, xasaasiyada cuntada ama baahiyo kale)
caddaynta taariikhda dhalashada (sida shahaaddada dhalashada)
xaaladda caafimaadka iyo tallaalka
macluumaadka dadka loo oggol yahay in ay ilmahaaga qaadaan iyo cidda la ogaysiinayo xaaladaha degdegga ah.
Adeeggaadu waxa uu ka dhigi doonaa macluumaadkan mid qarsoodi ah waxa aanad galangal buuxa u yeelan doontaa diiwaannada ilmahaaga.
Doorashada barnaamijka kindy
Dhammaan carruurta Queensland waxa ay xaq u leeyihiin in ay aadaan xanaano la ansixiyay ka hor dugsiga.
Barnaamijka kindergarten ee la ansixiyay waxa uu waafaqsan yahay tilmaameyaasha dawlada, waxana weey:
barnaamij waxbarasho oo ku salaysan ciyaar waxana bixinaya macalimiin takhasus u leh carruurnimada hore, iyada oo la raacayo tilmaameyaasha dawlada
caadi ahaan waxa la bixiyaa 15 saacadood toddobaadki, 40 toddobaad sanadkii, carruurta sanadka ka horeeya dugsiga
iyadoo la kaashanayo Queensland Kindergarten Learning Guideline ama barnaamij waxbarasho oo kale oo ay aqoonsan yihiin Queensland Curriculum and Assessment Authority.
si lagaaga caawiyo in aad ogaato barnaamijka ay ansixisay Queensland Government, waxaad eegtaa ‘kindy tick’.
Waa maxay kharashka kindy
Lacagta dugsiga xannaanadu waa ay kala duwan tahay iyada oo ku xidhan adeegga. La xidhiidh Kindy gaaga aad doorbiday si aad uga hesho faahfaahin ku saabsan qaabka lacagtiisa.
Kindergarten ka lacagta jaban ama bilaashka ah waxa la siiyaa qoysaska xaqa u leh, ayna ku jiraan qoysaska xanaanada, kuwaasi oo:
haysta Health Care Card ee hadda ee Dawlada Ustareeliya (HCC) (ama haysta ilmo leh)
haysta Australian Government Pensioner Concession Card ee hadda (xaq u lahaanshaha awtamaatiga ah ee HCC)
haysta Department of Veterans’ Affairs Gold Card ama White Card
haysta wada xidhiidh rasmi ah, sida waraaq, ka timiday wakaaladii ku haboonayd sheegaysana ujeeddada loo bixinayo HCC.
ay yihiin dadka asalka ah (aborigines) ama Torres Strait Islander (ama haysta ilme kaasi oo ah)
haysta saddex ama ka badan oo carruur ah, iskuna da’ ah , lana qoray sanad isku mid ah.
Kabitaanka kharashka yar ama bilaashka ah ee kindergarten waxa si toosa loo siinaya bixiyaha adeegaaga. Waxa ay yarayn karaan kharashaadkaaga jeebka ka baxsan. Waxa la qaadan karaa mar kaliya, xataa haddii aad buuxiso shuruudo kala duwan.
Qoysaska carruurtoodu ka qaybqaadanayaan barnaamijka kindergarten maalin dheer sidoo kale waxa ay xaq u yeelan karaan Commonwealth Government Child Care Subsidy.
Macluumaadka ku saabsan xaq u lahaanshaha kaabayaashan Dawladaha Barwaaqo Sooranka waxa laga heli karaa Centrelink.
Carruurta xannaanada ku jirta ama ama daryeelka qaraabonimada sidoo kale waxa ay galangal u yeelan karaan kaabayaal dheeri ah. La xidhiidh Kindy dabadeedna Child Safety
Service Centre si aad u hesho macluumaad dheeri ah.
La xidhiidh Queensland Government taleefonka 13 74 68
Raadi ‘kindy’ www.qld.gov.au/earlyyearscount
Free childhood flu vaccine